Waqtiga soo xaadirista fadhiyada Golaha Shacabka oo la kordhiyay – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa Saacad dheeraad ah ku daray waqtiga ay furmayaan fadhiyada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaana sidoo kale Saacad dheeraad ah lagu daray waqtiga soo xaadirista Xildhibaanada Golaha Shacabka ee BFS.
Fadhiyada Golaha Shacabka ayaa markii hore furmi jiray Afar saac (10:00 am) oo barqanimo waxaana la gaarsiiyay ilaa shan (5) saac oo barqanimo waxaana lagu sababeeyay in Xildhibaanada aysan soo xaadirin waqtiga lagu balamay islamarkaana sababtay in ay baaqdaan labadii kulan ee ugu dambeysay.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor go’aankaan gaaray waxaa uuna dhaqan galay maanta oo la sheegay in aysan wali xaadirin Xildhibaanadii loo baahnaa ee Fadhiga Golaha Shacabka.
Hadal uu ka jeediyay Xarunta Golaha Shacabka daqiiqado ka hor ayuu ku sheegay in Saacad dheeraad ah lagu daray waqtiga kadib markii tirada hada xaadirtay ay noqotay oo kaliya 40 Xildhibaan ka yar.
Kalfadhiga 5aad ee Golaha shacabka ayaa u muuqda mid ku bilaawday baaqasho iyo Kalsooni darro laga qabo in ay qasoomaan inta kulan ee loo baahnaa in uu ka koobnaado Kalfadhigaan 5aad ee Golaha Shacabka sida ay qabaan Aqoonyahaanada iyo Siyaasiinta Soomaaliyeed oo la hadlay Kalfadhi.